ဝက်ခြံ - ကုသမှုမျက်နှာ, ဆေးဝါးများ, ရိုးရာကုစား။ Demodex mite - လက္ခဏာများ
ဝက်ခြံ - မျက်နှာကို၏ကုသမှုနှင့်အမြန်ပြန်လည်နာလန်ထူလျှို့ဝှက်ချက်များ
အနာစိမ်းများနှင့်ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုလူသားတို့၏အဆင်းလှသောတစ်ဝက်တစ်ကယ့်ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, မျက်နှာပေါ်မှာအဖု။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 15% အတွက်အဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေများ၏အကြောင်းရင်း mite Demodex တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ် Get ခက်ခဲသည်မဟုတ်, လုံးဆေးညွှန်းထွက်သယ်ဆောင်နှင့်အရေပြားစောင့်ရှောက်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာလိုအပ်သည်။
ဝက်ခြံ - ကဘာလဲ?
ရိုးရှင်းစွာ, မေးခွန်း, demodicosis ဘာလဲဘယ်လိုဆက်ဆံဖို့ဖြေပါ။ ဒါဟာအရေပြားရောဂါ, mite Demodex, လူ့ microflora ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်သောများ၏အကြောင်းရင်းအေးဂျင့်သည်။ သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်သူအီမထိခိုက်စေဘဲလူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကျိန်းဝပ်။ မကြာခဏကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏အားနည်းခြင်းနှင့်လူနာများ၏ဟော်မုန်းရောဂါနှင့်ဆက်စပ် mite လှုပ်ရှားမှုအာူး။ အန္တရာယ်မှာအထိခိုက်မခံ Light-အရောင်, မြည်းကြိုးကိုဖြည်ခြင်းနှင့်အရေပြားရောဂါများအသားအရေမှကျရောက်နေတဲ့နှင့်အတူလူဖြစ်ကြ၏။
ကို tick ၏အနှစ်သက်ဆုံးကျက်စားရာနေရာ - အပေါများ sebum နှင့်အတူဒေသများ။ Demodex မျက်တောင်, မေးစေ့, နဖူး, nasolabial ခြံ, ပြင်ပအာရုံ meatus ၏ဒေသတွင်း၌အဆင်ပြေခံစားရပါတယ်။ အရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိမျက်နှာပေါ်နှင့်အလျှင်းမပြုဘဲအခြေအနေများအတွက် mite Demodex သာအသားအရေပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေရာ, ထိုနက်ရှိုင်းအလွှာသို့ထိုးဖောက်မှစတင်ခဲ့သည်။
Demodex - ကူးစက်မှုနည်းလမ်းများ
ယင်း၏ပိုင်ရှင်မဆိုအဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိဘဲမိမိအသက်၏လူ့အသားအရေပေါ်ပစ္စုပ္ပန် Demodex သွင်း။ သူသည်ပိုင်ရှင်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာစားပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမထိခိုက်ပါဘူး။ အဆိုပါ mite နှင့် commensalism လို့ခေါ်တဲ့လူကိုများအကြားထိုသို့သောဆက်ဆံရေး။ ကြားဆက်ဆံရေးကပ်ပါးကြားဆက်ဆံရေးကပြောင်းလဲမပါ commensalism စေရန်, tick ၏နံပါတ်4ကိုတစ်ဦးချင်းစီ6မျက်တောင်သို့မဟုတ်ဆိကြည်ဂလင်း၏တဦးတည်းထက်မပိုသင့်ပါတယ်။ mite များအတွက်အဆင်သင့်အခြေအနေကအရေပြားအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုပွားနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေရန်စတင်သည်အခါ။
ဝက်ခြံများနှင့်အသားအရေအသက်အရွယ်အန္တရာယ်များတဲ့ရောဂါမဟုတ်ပေမယ်ရောဂါ run ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, လေးနက်အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဝက်ခြံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထိုကဲ့သို့သောအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိပါတယ်:
ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့် ပတ်သက်. ထဲတွင် Neurosis ။ လူဦးရေရဲ့အမျိုးသမီးတဝက်၌ သာ. ဘုံ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကများပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးတစ်ဦးအားနည်းစေပါတယ်နှင့် mite ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအားရှိ၏။
အရေပြားနီခြင်း, sensitivity ကို, ယားယံခြင်း, nodules, အပေါ်ယံလွှာ၏ယိုယွင်း။
အရေပြားရောဂါများ: ဝက်ခြံ, rosacea ။
ဘယ်အချိန်မှာ demodicosis ရာစု: အမျက်ခမ်း၏ဖော, styes, မကျြတောငျမှေးဆုံးရှုံးမှု, မှုန်ဝါးသောရူပါရုံကို။
Rhinophyma - အထူးသဖြင့်ယောက်ျားအတွက်ရောဂါ၏အဆင့်မြင့်ဇာတ်စင်အတွက်ပိတ်ဆို့မှုကိုတိုးပွားလာ။ ကကင်ဆာအကျိတ်သို့သွားနိုင်ပါတယ်အတိုင်းဤရှုပ်ထွေး, ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်ပါသည်။
သငျသညျ demodicosis ပြုမူဆက်ဆံမီ, အရေပြားအထူးကုဆရာက mite ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရောဂါကြောင်းကိုသေချာရပေမည်။ ကသာဓာတ်ခွဲခန်းရောဂါအပြီးပေးနိုင်ပါသည်နောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ်, အောက်ပါအဆင့်တွေကိုပါဝင်သော:
ပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအားဖြင့် ကြိုတင်. အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်: ရောဂါအလှကုန်များနှင့်လိမ်းဆေးသုံးစွဲဖို့တားမြစ်ထားသည်ရှေ့တော်၌ထိုအပတ်အတွင်းအတွက်မြင့်မားသောအယ်လကာလီအကြောင်းအရာနှင့်အတူဂျယ်ဆေးကြောပါ။
ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း။ ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများလေ့လာဖို့ scraping အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွား Demodex mite ။ ယင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်အများအပြားမျက်တောင်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ရှာဖွေရေးမှာငှါ, မကျြတောငျမှေးဧရိယာ၌တည်ရှိသည်လျှင်။ ရောဂါရှင်းလင်းဖို့ဘေးဒဏ်သင့်အသားအရေမှလူနာတုတ် Scotch ၏ဏုလေ့လာမှုမှာတည်ရှိသည်အနှစ်သာရကိုသောတိပ်ဖုံးကွယ်ထားကြောင်းတဲ့နည်းလမ်း, ထိုညဉ့်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
လေ့လာမှု။ microscopic စာမေးပွဲအရေပြားစတုရန်းစင်တီမီတာနှုန်းကို tick ၏နံပါတ်ရေတွက်သည်။ ဤဒေသရှိထက်ပိုမို5တစ်ဦးချင်းစီကိုတွေ့ရှိပါက "demodicosis" ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံ - လက္ခဏာများ
demodekoz ရောဂါကို tick ၏မူပြောင်းခြင်း၏အရပျ၌မတူညီသောနှစ်ခုပုံစံများသို့ကွဲပြား:
မျက်နှာပေါ်မှာ demodex သွင်းများပြားစေလျှင်, ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်လိမ့်မည်:
အနာနှင့်အတူတစ်ဦး staphylococcal ရောဂါကူးစက်ဖို့ကဆက်ပြောသည်နိုင်သည့်ရန်အမျိုးမျိုး၏ဝက်ခြံ;
အလွန်အကျွံ sebum ထုတ်လုပ်မှုကြောင့်အဆီပြန်တောက်ပအသားအရေ;
ရောဂါ၏ Ocular ပုံစံထိုကဲ့သို့သောဆိုင်းဘုတ်များလေ့လာတွေ့ရှိကြသောအခါ:
အဆိုပါရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် matted မျက်တောင်;
mite ciliary မီးသီးများ၏ရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်မျက်တောင်ဆုံးရှုံး;
ဝက်ခြံပျောက်ကင်းအောင်ကုသရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နာတာရှည်ရောဂါဘကိုရည်ညွှန်းပေမယ့်တည်ငြိမ်လွှတ်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုရောဂါ Demodex သွင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်လြှငျ, အသားအရေကုသမှုအောက်ပါဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကူအညီဖြင့် 2-3 လကြာမှထွက်ယူသွားတတ်၏:
ဝက်ခြံ - ကုသမှုမျက်နှာ, မူးယစ်ဆေးဝါး
မျက်စိရောဂါများပုံစံဆီမှေး demodekoza Physostigmine လျှောက်ထားခြင်းနှင့် Tosmilen, Armin သို့မဟုတ် phosphacol eyedrops ။ demodekoz ရောဂါရှိလျှင်, ကုသမှုထိုကဲ့သို့သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၏အကူအညီဖြင့်မျက်နှာပေါ်မှာထွက်ယူသွားတတ်၏:
ဇင့်ကခြောက်သွေ့, အရေပြားပိုးသန့်ဆေးဘို့နံ့သာဆီ ihtiolovaya နှင့်ယားယံခြင်းလျှော့ချပေးပါတယ်။
Gels Metrogil , Metroseptol နှင့် metronidazole ရောဂါပိုးကိုတိုက်ဖျက်ဖို့။
သွင်း၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချ, မတည့်တုံ့ပြန်မှုလျှော့ချ, ရောင်ရမ်းခြင်းမှသက်သာရာရစေရန် Sulfodekortem နံ့သာဆီ။
arthropod ရောဂါပိုးတိုက်ဖျက်ရေးရည်ရွယ် Permethrin ခေါင်းလျှော်ရည်။
ဝက်ခြံ - ကုသမှုရိုးရာကုစား
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး Demodex mite ထင်ရှားလျှင်ကုသမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ သွင်းတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ကောင်းသောအကူအညီနဲ့တိုင်းရင်းဆေးရှိနိုင်ပါသည်။ demodectic ဝဲ၏ကုသမှုများအတွက်, သငျသညျထိုအချက်ပြုတ်နည်းများကိုသုံးနိုင်သည်:
ဒေါန၏ decoction ။ ဒါကြောင့်4tbsp အောင် minced ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောလီတာကုန်ကြမ်းလောင်း,5မိနစ်ပြုတ်နှင့်3ဇအပြင်းအထန်တောင်းဆို။ လာမယ့်နေ့, ဝက်ဖန်အပေါ် (ထိုညဥ့်အပါအဝင်) တစ်ဦးချင်းစီတစ်နာရီ၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကကိုသုံးပါ - အတူတူပင်ပမာဏကိုတိုင်းနှစ်ခုနာရီ,6နေ့ကဖို့ 3rd အတူ - တစ်ကြိမ်သုံးနာရီ။
အကျော်အသီးဖျော်ရည်နှင့်အတူလိမ်း။ ဘယ်အချိန်မှာ demodicosis ၏ရောဂါ, ကုသမှုလောလောလတ်လတ်ညှစ်ဖျော်ရည်၏မျက်နှာပေါ်မှာထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အသီးဖျော်ရည်ကိုတစ်ဦးမြုံအထည်နှင့်အတူ wetted နှင့်မျက်ခမ်းကလျှောက်ထားသည်။
celandine ၏ပြုတ်ရည်။ celandine အမြစ်များ 300 ဂရမ်သန့်စင်ပြီးနေကြာဆီ 350 ml ကိုသွန်းလောင်းနှင့်2ရက်ကြာနေရောင်ခြည်ကြောင့်ပေးပါ။ အရောအနှောအချုပ်ခန်းပြီးနောက်မှောင်မိုက်ဖန်တစ်ဦးကွန်တိန်နာသို့သွန်းလောင်းခဲ့သည်နှင့်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားလေ၏။ demodekoz ရောဂါလျှင်, မျက်နှာပေါ်မှာကုသမှုပြဿနာများကိုဘေးဒဏ်သင့်အသားအရေမှအိပ်ရာမသွားမီအရောအနှောလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်3ပတ်ကထွက်သည်ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရေဒြပ်စင် - moisturizing မျက်နှာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ
အဝါနုရောင်ရှိသောဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
Kim Kardashian ကအရဒုတိယကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်သူမ၏ပုံချီ!
Hugh Jackman အနားယူနေချိန်တွင်သူက paparazzi ဖြင့်လုပ်သောပုံမှန်မဟုတ်သောသဘောတူညီချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော
Gloxinia bloomed - ဘာလုပ်ရမှန်း?
ကရိုနီရောင်နှင့်ဒိန်ခဲ - တိုင်းအရသာ 8 စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ချက်ပြုတ်နည်းများ!